အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ယနေ့ အကြိုက်ဆုံး ပို့စ်
ယနေ့ အကြိုက်ဆုံး ပို့စ်
OIC ကဖေါ်ထုတ်သွားတဲ့အချက်များ --------------------------- ဘာတွေလည်း ဆိုတော့..။ (၁) အိုအိုင်စီက အသေအလဲ ချဉ်းကပ်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး.. အိုအိုင်စီ အသေအလဲ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဘင်္ဂံလီကိစ္စတွေရဲ့... အရေးပါတဲ့သူက...အမှန်တကယ်ဘယ်သူ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ (၂) ဘင်္ဂံလီအရေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာဟာ.. ဘယ်သူ့လက်ထဲမှာလဲ..ဘယ်သူမှာတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာသိလိုက်ရသလို၊ OIC ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် ဘယ်သူ့မှာပဲတာဝန်ရှိသလဲ ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရှိရတယ်။ (၃) အိုအိုင်စီကိစ္စအပါအ၀င် ဘင်္ဂံလီကိစ္စ မှာ ဒေါ်စု နဲ့ NLD အပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို..အရမ်းတကာရော စွတ်စွဲပုတ်ခတ်နေတဲ့သူတွေ.. အသံတွေငြိမ်သွားတာကို ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ သုံးချက်တွက်နည်းနဲ့တွက်ကြည့်ရင်.. ဘင်္ဂံလီကိစ္စမှာသူတို့ဟာ- ဘယ်သူ့ကိုပဲဝေဘန်ကြတယ်.၊ ဘယ်သူ့ကိုကျတော့ ၊ လုံးဝ..မဝေဘန်ကြဘူး.. အဲဒီတော့..သူတို့ဟာ.... ? တွေပဲဖြစ်တယ်..။ (၄) အိုအိုင်စီလို ထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုနဲ့.. လှုပ်ရှားမှုတွေ အ၀င်အထွက်တွေကို သေသေချာချာလေး လေ့လာကြည့်ရင်.. ဘာသာရေးအရေးအခင်းတွေရဲ့ ဇာတ်အိမ်တည်မှုလေးတွေကိုပါ.. ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းသိရှိရမှာဖြစ်တယ်..၊ (၅) အသေအချာဆုံးကတော့...OIC လာတဲ့အချိန်စ္စမှာ မသိမသာထူးခြားမှုက. နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံနေကျဒေါ်စုနဲ့..မတွေ့ခဲ့တာတွေ ရယ်..၊ ဘင်္ဂံလီကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ကိစ္စကို NLD ပြောခွင့်ရသူက ဝေဘန်ပြောဆိုတာတွရယ်ကို ကြည့်ရင်..လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ သဘောထားနဲ့ လူထုပါတီရဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရတယ်။ အင်္ဂံလန်မှာ BBC လိုမီဒီယာကြီးကို တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးပြီး ကမ္ဘာကိုလွှင့်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စု အခြေအနေကပါ ပိုမိုခိုင်မာအောင်တွန်းအားပေးသွားတယ်..၊ ဒီ့ထက်ရှင်းတာမရှိတော့ဘူး.. အဲဒီတော့...ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်ဖေါ်နေတဲ့.. သူတွေသတိထားရမှာကတော့.. ကိုယ်မွှေးတဲ့မီးက... ကိုယ့်ဆံပင်ကိုယ် အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့.. လောင်နေပြီဆိုတာပါပဲ.. ငြိမ်းလို့ရရင်လဲ.. .ခေါင်းကတော့.စုတ်ပြတ်သတ်သွားမှာပဲ.၊ မသေရင်ကံကောင်း..၊